/Blog/Testosterone cypionate/Indlela yokwenza i-Testosterone Cypionate iphelile kwi-Raw Steroid Powders
ezaposwa ngomhla 09 / 22 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Testosterone cypionate. Ibe 2 Comments.
Kwindawo yokwakha umzimba, kukho ukuthengisa okutshisa ukutshisa i-steroid-Testosterone Cypionate powder, Esinceda ukwakha imisipha kunye nokuqinisa amathambo, isetyenziselwa ukulahlekelwa kweoli kunye ukuphucula ngokwesiniNgokuqhelekileyo abantu bathenga iimveliso ze-Testosterone Cypiate kwiivenkile ze-intanethi. Okwangoku, i-bodybuilder eninzi iyakuthi uthenge i-steroids powder eluhlaza ngenxa yexabiso layo elingaphantsi kwaye kungekhona iindlela zokusebenza ezinzima. Namhla silapha ukuze sihlanganyele indlela engcono yokugqiba i-Testosterone Cypionate powder.
I-mL nganye ye-100 mg / mL isisombululo iqulethe:
I-Testosterone Cypionate powder ............................................................................... 100 mg
Ioli yekholethi ............................................................................................. 736 mg
Utywala obunxilisayo (njengolondolozo) .................................................................. 9.45 mg
Okokuqala-Gungqa i-Testosterone Cypionate kwi-beaker yeglasi njengoko kuboniswe ngentla, yongeza i-Benzyl Alcohol ne-Benzyl Benzoate.
Okwesibini -Iimvumba ziza kuqala ngokuqhekeza i powder kodwa ukwenzela ukukhawuleza inkqubo ukulungiselela ukuhlamba amanzi.
Yongeza-Hlanganisa ioli ye-Cottonseed efudumeleyo kwisisombululo
Yilandela-Yenza izisombululo kwisirinji oza kuluhlula
Ingaba kulula kakhulu? Ukusetyenziswa okulula ngexabiso elikhuphisanayo.
zhang, ukumkani03 / 15 / 2018 kwi-1: 29
Njengeenkcukacha zakho, ioli iya kuba yimilenze okanye iguquke xa uyikhuphela entwasahlobo naseminqeni. Isizathu esibalulekileyo kufuneka sibe zezizathu ezibini:
1. Kukho umswakama okanye amanzi entwasahlobo okanye kumanzi. Ukuxutywa kwamanzi kunye neoli kuza kuvela kuloo ngxaki.
Isixazululo: Ukubilisa ioli kwimizuzu ye-5-10. ubushushu kwiqondo le-100 ngeke lusetyenzise uvavanyo oluninzi. Emva koko, ukuqinisekisa ukuba intwasahlobo kunye ne-vial iyomile iyonke, ngaphambi kokuba uyisebenzise.
2. Uvelaphi? Ukuba igumbi lakho lokushisa liyakubanda kakhulu, uvavanyo lwe-E / Cyp / p lunokungena kwioli kwaye lubonakala ludangele okanye lukhulu.
Kwaye, usebenzisa i-BB ukuze uqine ioli?
Ukuba unokwabelana nge recipe yakho, kunokunceda.
Brew03 / 14 / 2018 kwi-1: 32 ntambama
Sawubona .. ndinemibuzo .. ndazama ukuyihlawula ngamaxesha amaninzi ngeendlela ezahlukeneyo .. kodwa i-probldm yami i .. iba mnyama okanye iguquke xa ndikhupha i-testo E ephelileyo kwindlela yam yokutshiza ndiyibuyisele i-vial .. yintoni isizathu? Ndixuba 250mg / ml ..
I-Steroids ipowder kumthetho: I-Legal okanye engekho mthethweni	Iyintoni i-yohimbine kwaye isebenza njani?